Gaaffiin siyaasaa barattoota Yuunivarsitii akkamiin haa deebi'u? - BBC News Afaan Oromoo
Gaaffiin siyaasaa barattoota Yuunivarsitii akkamiin haa deebi'u?
Image copyright Dr Jeilu & Prof Bekele
Goodayyaa suuraa Dr. Jeyluu Umar Umarii fi Pirof. Baqqale Guutamaa Jabeessaa
Yuunivarsitiin Finfinnee lammii biyya alaa dabalatee kaadhimamtoota 22 pirezidaantummaaf dorgomsiisaa ture isaa ni yaadatama.. Isaan keessayis 13 haaluma tarsimoo ittiin hojjetan dhiyeeffatan calalamuun saddeetti gara marsaa dorgommii itti aanutti darbaniiru.
Isaan kunimmoo ALI Amajjii 4, bara 2010 marii paanaalii koreen filannoo Yuunivarsitichaa qopheesserratti yaada kennaniin qabxii argatan irratti hundaa'ee namoota darban shan maqaansaanii boordii yuunivarsitichaaf darbuu Biiroon Komminikeeshinii Yuunivarsitichaa beeksiseera.
Boordichis namoota sadi filatee Ministeera Barnootaaf dabarseera, yeroo dhiyoo keessattis eenyu akka darbe ni beekama.
Rakkinni siyaasaa biyyattii keessatti waggoota darbaniif mudachaa tureen dhaabbilee barnootaa olaanoo keessatti sirni baruu fi barsiisuu gufateera, lubbuun barattootaa darbeera, miidhaan cimaanis ga'eera.
Kaadhimamtoonni sadan marsaa xumuraaf ga'anis Pirofeesar Baqqalaa Guutamaa Jabeessaa, Dr. Jeyluu Umar Huseenii fi Pirofeesar Xaasoo Waldahannaa Kaahisaayi keessaa Pirofeesar Baqqalaa fi Dr. Jeyluun akkaataa tasgabbii uumuun sirna baruu fi barsiisuu jeequmsarraa bilisa ta'e gaggeessuu danda'an irratti BBC'f yaada kennaniiru.
Dr. Jeyluu Umar Huseenii
Rakkoo bulchiinsa gaarii dhaabbilee barnootaa olaanoo keessatti hookkara uumaa jiru furuuf hooggansa sirrii fi bulchiinsa gaarii yuuniversitii keessatti bu'uuressuun tarkaanfii jalqabaa ta'uu dubbatan.
Barattoonni qaama hawaasaa waan ta'aniif gaaffiin hawaasa bal'aa biraa ka'u gara yuuniversitii dhufuunsaa hin oolu. Kanaaf yeroo barattoonni gaaffii gaafatan, keessumeessinee tasgabbiin ilaallee gaaffichi sadarkaa yuuniversitiitti ni furama moo hin furamu kan jedhu irratti mari'achuun barbaachisaadha.
Gaaffiin barattootaa humna yuunivarsitichaan ol yoo ta'e gaafficha qabannee qaama dhimmichi ilaallatu waliin akka mari'atamu haala mijeessuu qabna. Yuunivarsitiin bakka burqaa beekumsaa ,iddoo qorannoo fi qo'annoo waan ta'eef waltajjiin bilisaa yaadnii fi gaaffileen siyaasaan walqabatanii fi kanneen biroos irratti keessumman jiraachuu qabas jedhaniiru.
Barattoonni maaliif gaaffii siyaasaa kaasan jechuurra yuunivarsitichi qaamni dhimmi ilaalu akka barattoota mariisisu haala mijeessuu qaba. Yuunivarsitiin taa'ee gaaffii siyaasaa barattoonni kaasan eeguu qofa osoo hin taane qorannoo gaggeessuun haala qabatamaa siyaasa biyyattii fi jijjiirama jiru barattoota waliin mari'achuuf dirqama qabas jedhaniiru.
Pirofeesar Baqqale Guutamaa Jabeessaa
Barattoonni barnoota qofa malee gaaffii siyaasaa kaasuu hin qaban jechuun hin danda'amu. Barattoonni qaama hawaasaatti waan ta'aniif gaaffiin biyyaa isaan ilaallata. Warraaqsi barattootaa durii kaasee waan tureedha. Dur barattoonni tokko ta'anii sirnicharratti qabsaa'u. Amma garuu sabaan waan wal hiraniif tokkummaan jira jechuu hin dandeenyu.
Waggoota darban gaaffiin eenyummaa ka'aa tureera, namni hunduu kana fudhateera. Garuu barattoonni gaaffii eenyummaa qofa osoo hin taane waa'ee biyyaa, walqixxummaa fi kabaja namummaatiif xiyyeeffannaa kennuu akka qaban yaada kennan.
Barattootni keenya sabaan walqooduurra, miira tokkummaa, waldhagahuu fi waliin mari'achuu akka qabaatan qaruutu nurra jiraata.
Yuunivarsitiin qofaasaa jijiirama hin fidu. Wanti murteessaan mootummaanis gaaffii siyaasaa fi dinagdeetiif deebii keennaa deemuu qaba. As keessatti garuu yuunivarstiin ga'ee mataasaa ni qabaata. Haala qabatamaa ammaa yoo ilaalle mootummaan deebii kennuurratti boodatti harkifateera, kunimmoo dubbii daranuu hammeesse.
Yuunivarsitiin mootummaa , hawaasaa fi barattoota gidduutti hariiroo gaarii uumuu qaba. Lammii nama kabajuu fi lubbuu namaaf dhimmamu uumuu qaba yuuniversitiin. Barattoonni miiraan deemuurra tasgabbaa'anii mariidhaan rakkoo furuu akka amaleeffatan barsiisuu qabna. Kanaan achi furmaanni biraan hin jiru.